Fanafihana antoandro tetsy Avaradoha: maty voatifitra ilay tompona “grossiste” | NewsMada
Par Taratra sur 06/06/2020
Fotoana fohy taorian’ny nahatongavany teny amin’ny hopitaly, tsy tana ny ain’ilay ramatoa, tompona tranombarotra mpamongady notafihin’ny jiolahy, tetsy Avaradoha, omaly. Teo amin’ny lohany no voan’ny bala. Naratra voatifitra ihany koa ireo anadahiny, izay voa teo amin’ny tongony sy ny tehezany.
Nihoron-koditra indray ny mponina teny Avaradoha sy ny manodidina, omaly, nandritra ity fanafihan-jiolahy amin’ny andro antoandro ity. Raha ny tatitra nampitain’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena, jiolahy miisa efatra samy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika ity mpamongady zava-pisotro tetsy Avaradoha ity. Raha ny fanazavan’ireo olona nahita ny zava-nisy teny an-toerana, samy tsy nanampo na inona inona ireo olona tao am-pivarotana sy ireo olona teo amin’ny manodidina kanefa betsaka fiara nifamezivezy, tamin’io fotoana io. Araka ny hita tao anaty “camera de surveillance”-n’ilay tranombarotra dia nandeha an-tongotra tamin’ny lalankely iray avy any Soavinandriana izy efa-dahy ireto. Rehefa tonga teo amin’ilay tranombarotra ry zalahy dia niditra tsiroaroa toy ireny olona hividy entana ireny. Olona telo no novantanin’izy ireo tao am-pivarotana, tamin’io fotoana io dia ny renim-pianakaviana iray tompon’ny tranombarotra niaraka tamina olona roa hafa. Nandrahona sady nitifitra avy hatrany ireo jiolahy raha vantany vao tonga tao am-pivarotana. Vokany, voatifitra teo amin’ny lohany ilay renim-pianakaviana raha voatifitra teo amin’ny lamosiny sy ny tanany kosa ireo olona roa hafa.
Lasan’ireo mpanafika ny vola 1 tapitrisa Ar…
Raha ny tatitra nampitain’ny polisy hatrany, lasan’ireo mpanafika ny vola 1 tapitrisa Ar tao amin’ny fitoeram-bola niampy telefaonina iray. Naharitra teo amin’ny iray minitra teo ny faharetan’ny fanafihana, araka ny fanampim-panazavana. Nivoaka moramora ireo olon-dratsy taorian’izay. Araka ny filazan’ireo nahita ny zava-niseho teny an-toerana, nisy moto efa niandry azy ireo teo amin’ny toerana antsoina hoe Antsahakely ka tsy hita intsony ny nanjavonan’ireo mpanafika. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly ireo niharam-boina, saingy namoy ny ainy ilay renim-pianakaviana, araka ny filazan’ny polisy. Fotoana fohy taorian’ny fanafihana, tonga teny ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo (CSP3) Antaninandro, ny polisin’ny UIR ary ny polisin’ny FIP Antanimora. Mbola mitohy ny fikarohana ireto jiolahy ireto, hatramin’ny omaly hariva. Mirongatra indray ny fanafihana eto an-dRenivohitra ary tsikaritra fa manao ny ataony mihitsy ny jiolahy. Tsy vitan’ny mandroba anefa izy ireo fa mbola mandatsaka aina koa. Aiza ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany manoloana izao herisetran-jiolahy izao?
Jean Claude sy Fano